နယ်စည်းမခြား မြန်မာ ဘလော့ဂါများ: October 2007
Posted by နယ်စည်းမခြား မြန်မာ ဘလော့ဂါများ at 3:03 AM 1 comment:
Posted by Welcome Asean to Myanmar at 11:42 AM No comments:
Posted by Welcome Asean to Myanmar at 8:29 AM No comments:
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျား. လှပတဲ့ ကမ်းခြေဓာတ်ပုံတွေကို သီတင်းကျွတ်မတိုင်ခင်လေးမှာ တင်လိုက်တယ်။ မိတ်ဆွေများအားလုံးကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တောတောင် ရေမြေ ကမ်းခြေ နဲ့ဖြူဖွေးတဲ့ သဲသောင်ပြင်က အနှိုင်းမဲ့ပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့လဲ world top ten ထဲစာရင်းဝင်ခဲ့တာပေါ့ ။ ပင်လယ်ရေက အရမ်းကို ပြာပြီးကြည်စိမ်း နေတာပဲ သဲသောင်တွေဆို ဖွေးဥပြီး မှုန့်နေတာပဲ နောက်ပြီး ရေအောက်မှာ သိပ့်လှတဲ့ ရောင်စုံငါး တွေအများကြီးပဲ သိပ့်ပြီးအပန်းဖြေခြင်စရာနေရာလေးပါ ။ ဒီကိုအလည်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေက ဥရောပတိုက်သားတွေများတယ်။ ဟန်းနီးမွန်း အတွဲတွေ အတွက်စိတ်ကြိုက်နေရာလေးပေါ့။ ကျွန်းအမည်က TIOMAN ISLAND တဲ့ ။ ဒီဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လက်ရှိ နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ tioman island ( www.japamalaresorts.com ) မလေးရှား မှာရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာကရာသီဥတု နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ မိုးရာသီ ( အောက်တိုဘာ မှ မတ်လ အထိ ) နဲ့ နွေရာသီ ( ဧပြီ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ ) နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။
အခုဆို မိုးတွင်း ရောက်လာပြီ။ လှိုင်းရော၊ လေရော၊ မိုးရော၊ သဲကြီး မဲကြီး နဲ့ အားခဲပြီးလာနေကြပါပြီး၊
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ကော့မန်းလေးပေးခဲ့ပေါ့ ။ ဒီနေရာက အခြားဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ပြီးတင်ပေးမယ်လေ။ အော်နောက်တစ်ခုကျန်သေးတယ် မကြာမကြာ လင်းပိုင်ငါးတွေလဲ တွေ့ရတယ်။ ကြည့််ခြင်တယ်ဆို ထပ်တင်ပေးမယ်. ကော်မန်းပေးခဲ့ရင်ပေါ့
Posted by Welcome Asean to Myanmar at 9:39 AM No comments:
မလေးရှားမှာ နောက်ထပ် တစ်နှစ် ထပ်နေရအုံးမယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် ၂ နှစ်ပြည့်လို့ ဒုတိယအခေါက် အိမ်ပြန်ခြင်တဲ့ ဆန္ဒက ရင်ထဲမှာအပြည့်နဲ့ပေါ့၊ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခေါက်တော့ မဖြစ် ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ မရ ရအောင်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်..လွှမ်းရမဲ့သူတွေကို လွှမ်းရတာလဲ အမောပါပဲ။ စဉ်စားရင်းနဲ့လည်း အချိန်တိုင်းရင်ခုန်မိတယ်..။ ရေခြားမြေခြားမှာ ပင်လယ်ခြား သမုဒ္ဒရာခြား ပြီးဘ၀ကို ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့လိုပဲ အခြားသောမိတ်ဆွေတွေလည်း မနည်းပါဘူး ။ သူ့ဘ၀နဲ့သူ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ဆိုပေမဲ့ ဒီနည်စည်းမခြား blog နဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ bloger မောင်နှမတွေကို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ နွေးထွေးမှုတွေ အင်အားတွေအများကြီး ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ခရီးသွားခဲ့ကြတဲ့ အတွေအကြုံနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဒီ blog လေးမှာဖော်ပြရင်းနဲ့ ..... ဆက်လက် ရှင်သန်သွားမယ်လို့ ......(ပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေကိုလည်း တင်ကြပါနော်)..
Posted by Welcome Asean to Myanmar at 9:30 AM No comments:
Posted by MELODYMAUNG at 3:49 AM No comments: